Liverpool oo 16 dhibcood ku hoggaamineysa Horyaalka Ingiriiska - Jowhar Somali Leader
Home Ciyaaraha Liverpool oo 16 dhibcood ku hoggaamineysa Horyaalka Ingiriiska
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 16 dhibcood ah ku qabatay hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League iyo hal ciyaar oo u dhiman kaddib markii ay 2-0 ku garaacday Manchester United.
Liverpool waxay garoonkeeda Anfield ku qaabishay shalay kooxda ay cadaawadda weyn ka dhaxayso ee Manchester United oo ahayd kooxdii kali ahayd ee xili ciyaareedkan barbarro kusoo qabatay kulankii Old Trafford, hase yeeshee Reds waxay muujisay awoodda ay u leedahay inay koox kasta burburiso, waxaanay garoonka dhexdiisa jidjiideen United oo qaybtii dambe qaab fiican la timid ka hor intii aanu Mohamed Salah ku samirsiinin goolka labaad.
Goolka koowaad waxa qaybtii hore madax ugu dhaliyey difaaca reer Netherlands ee Virgil van Dijk, midka labaadna waxa daqiiqaddii ugu dambaysay ee dhamaadka ciyaarta ku daray Mohamed Salah oo kaga baxay inkaartii ka haysatay inuu goolal ka dhaliyo Manchester United.
Guushan waxay siisay Liverpool inay hoggaanka horyaalka ku qabato 64 dhibcood oo ay ka heshay 22 ciyaarood oo ay soo dheeshay horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan, waxaana kulanka baaqiga u ah ay ciyaari doontaa dhamaadka bishan January, taas oo siin karta fursad ah inay yeelato 67 dhibcood, isla markaana ay 19 dhibcood oo nadiif ah ka horreyso kooxda kusoo xigta ee Manchester City.
Toddobaadkan waxa uu ahaa mid ku adkaa kooxaha waaweyn oo dhan marka laga reebo Liverpool, waxaana guul-darrooyin xanuun badan la kulmay Chelsea, Leicester City iyo Manchester United, sidoo kalena waxa barbarro galay Manchester City, Tottenham, Everton, West Ham iyo Arsenal, koox kaliya ee weyn ee guul heshayna waxay noqotay Liverpool oo xili ciyaareed mucjiso ah qaadanaysa, isla markaana haddaba isku diyaarinaysa inay gacanta ku dhigto horyaalkeedii ugu horreeyey ee Premier League ah muddo soddon sannadood ah.
Barbarraha ay Manchester City sabtidii la gashay Crystal Palace waxay keentay in 48 dhibcood ay ka heshay 23 kulan oo ay ciyaartay, kooxda kusoo xigta ee Leicester City ayaa iyaduna soo fadhiisatay 45 dhibcood oo ay ka urursatay 23 ciyaarood oo ay dheeshay, waxaana khasaare 2-1 ah u geysatay Burnley oo garoonkeeda ku qaabishay.